कोरोना महामारी २०२१ भित्र अन्त हुने, भ्याक्सिन र औषधी धमाधम बन्दै – Himshikharnews.com
Sunday October 24, 2021 |
कोरोना महामारी २०२१ भित्र अन्त हुने, भ्याक्सिन र औषधी धमाधम बन्दै
६ भाद्र २०७७, शनिबार १७:०२
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयससले कोरोना भाइरसको महामारी दुई वर्षभित्र अन्त हुने विश्वास लिएका छन् । उनले यसअघि यो महामारी कहिल्यै अन्त नहुने भनी दिएको अभिव्यक्तिभन्दा यसपटक फरक भनाई सार्वजनिक भएको छ ।
शुक्रबार जेनेभामा बोल्दै घेब्रेयससले दुई वर्षभित्र नै महामारी अन्त हुने विश्वास लिने क्रममा स्पेनिस फ्लुको उदाहरण दिएका थिए । सन् १९१८ मा देखिएको उक्त महामारी दुई वर्षमा अन्त भएको थियो । अहिलेको प्रभावकारी प्रविधिले दुई वर्ष पनि नलाग्ने उनको विश्वास रहेको छ ।
डब्लुएचओ प्रमुखले कोरोना भाइरसको तिथि तोकेर अन्त हुने विश्वास गरिरहँदा सँसारभर कोभिड १९ को भ्याक्सिन धमाधम विकास भइरहेको छ । रुसले भ्याक्सिन विकास गरेर दर्ता गरिसकेको छ । अमेरिका, युरोप, चीन, भारतलगायतका देशहरु भ्याक्सिन परीक्षणका क्रममा छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी उनको पछिल्लो भनाई आएको देखिन्छ ।
घेब्रेयससले विगतमा भ्याक्सिन जादुरको छडी हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भ्याक्सिन आएपछि महामारी अन्त हुनेमा ढुक्क नहुन भनेका थिए । यतिसम्मकी संक्रमण कहिल्यै अन्त नहुने भनेपछि त्रास बढेको थियो ।
डब्लुएचओको गतिविधि बेला बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुएचओसँगको सम्बन्ध रद्द नै गरेका छन् । उनले डब्लुएचओमाथि चीनको स्वार्थ अनुसार चलेको आरोप समेत लगाए । दिदै आएको फन्ड नै रोकिदिएका छन् ।
एकातर्फ डब्लुएचओ विवादमा पर्न थालेको छ । अर्कोतर्फ डब्लुएचओका प्रमुख घेब्रेयससको कोभिड १९ महामारीबारे विपरित भनाईहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
जे सुकै भएपनि कोरोना महामारी दुई वर्षभित्र अन्त हुने विश्वाससहितको भनाई सार्वजनिक हुनु अर्थपूर्ण छ । यसले विश्वमा नयाँ आशा जागेको छ । विश्वभर एक सय ६० भन्दा बढी भ्याक्सिन विकास भइरहेको, २५ वटा मानव परीक्षणका क्रममा रहेको र तीनवटा तेस्रो चरणको मानव परीक्षणमा रहेकाले नयाँ आशा जागेको छ । वैज्ञानिक आविष्कार र अनुसन्धानले विश्वमा कोरोनामाथि जीत हासिल गर्ने संकेतहरु देखिएको छ ।
अहिलेकै गतिमा भ्याक्सिन विकासमा गम्भीरता हासिल भई सफलता प्राप्त भएमा सन् २०२१ भित्र विश्वबाट कोरोना भाइरसको महामारी अन्त हुनसक्छ । विश्वका पाँच कम्पनि भ्याक्सिन विकासमा सफलतातर्फ पुगेका छन् । उनीहरुले यसै वर्ष उत्पादन शुरु गरी प्रयोग गर्ने तय भइसकेको छ । रुसी भ्याक्सिन आउँदो हप्ताबाट विश्वका विभिन्न देशमा समेत प्रयोग हुँदैछ । भ्याक्सिनको पहुँच विश्वभर सुनिश्चित गर्ने तत्परता समेत देखाइएको छ । यसरी अब महामारी अन्तको संकेतहरु देखिन थालेको छ ।
मानवले जस्तोसुकै चुनौतीको पनि डटेर सामना गर्ने र आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गरिरहने सन्देश यसपटक प्रवाह हुने देखिदैछ । सँसार पुरानै लयमा फर्कने र आर्थिक तथा सामाजिक जीवन चलायमान हुने संकेतहरु देखिन थालेको छ ।- एजेन्सी
साहित्यकार वियस प्रहरीको जागिर
टेलिकमको सेवा गुणस्तरहीन हुँदा
काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन :
काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन : यस्तो बन्नेछ केन्द्रीय कार्य समिति
साहित्यकार वियस प्रहरीको जागिर छाडेर माओवादी केन्द्रमा
टेलिकमको सेवा गुणस्तरहीन हुँदा उपभोक्ता हैरान
मध्यरात त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेको सिल्क एयर भित्र भएको के थियो?
भ्रष्टाचारको फायल खोल्न र कारबाही गर्न सिंगो देशको माग छ : विश्वप्रकाश शर्मा
नयाँ क्रियाशील सदस्य बनेकाहरू कांग्रेसका कुन-कुन पदमा उठ्न पाउँछन्?
काँग्रेसका निर्वाचित १३ जिल्ला सभापति को कुन पक्षका ?
फुटबल खेल्ने गाई (भिडियोसहित)
जनै किन लगाइन्छ ? यस्तो छ वैज्ञानिक र व्यवहारिक पक्ष
हावाहुरीसहित भारी वर्षा
दसैंमा टीका लगाउँदा जप्ने मन्त्रको अर्थ के हो ?
दसैँ अवधिभर कस्तो छ मौसम ?